के भयो रियासालाई ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/के भयो रियासालाई ?
के भयो रियासालाई ?
काठमाडौँ । चर्चित शृखला कोलेज नेपालबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी रियासा दाहाल एक बहुमुखी प्रतिभाकी धनी कलाकार हुन् । मेरी बास्सैमा लामो समय अभिनय गरेर चर्चा कमाएकी रियासा हाल मेरी बास्सै छाडेर ग्राहो छ होमा मुख्य कलाकारका रुपमा अभिनय गरिरहेकी छिन् । रियासा पछिल्ला दिनमा कैयौँ म्यूजिक भिडियोमा पनि देखा परिन् । उनको लोकप्रियतासँगै सिरियल गाह्रो छ होमा उनको नि ध न को दृश्यलाई देखाइएको छ । जुन दृश्य अहिले सामाजिक संजालमा पनि भाइरल बनिरहेको छ ।
गायिका मेलिना राईको आवाजमा रहेको नयाँ गीत र भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक तिमी बिना’ बोलको गीतमा शब्द रोबिन टोटोको, संगीत संयोजन टेकेन्द्र याक्सो लिम्बुको र कम्पोज तारा लक्सम लिम्बुको रहेको छ।
खर्च कटाएर धार्मिकस्थल हलेसीमा मात्रैं ६ दिनमा भेटी आम्दानी ८ लाखभन्दा बढी
बाबा ग्यास उद्योगमा पसेको बाढीले सिलिण्डर वगाएर सौराहा पुर्यायो, कति भयो क्षती ?
कलेज पढ्दै गरेकी युवतीको बयान : म त्यो दिन …..